Sergio Ramos, Asensio, Toni Kroos, Gareth Bale, Casemiro Iyo Vasquez Oo Dhamaantood Ka Hadlay Tegista Cristiano Ronaldo Iyo Dareenkooda – Cadalool | Shabakada Wararka Ciyaaraha
HomeWararka MaantaSergio Ramos, Asensio, Toni Kroos, Gareth Bale, Casemiro Iyo Vasquez Oo Dhamaantood Ka Hadlay Tegista Cristiano Ronaldo Iyo Dareenkooda
Sergio Ramos, Asensio, Toni Kroos, Gareth Bale, Casemiro Iyo Vasquez Oo Dhamaantood Ka Hadlay Tegista Cristiano Ronaldo Iyo Dareenkooda
Ciyaartooyada kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa dhamaantood ka falceliyey heshiiskii Cristiano Ronaldo ugu wareegay Juventus, kaddib markii labada kooxood kala qaateen lacag dhan 105 milyan oo Euro.
Kabtanka Real Madrid, Sergio Aguero oo ay wehelinayaan laacibiinta kale ee kooxda ayaa farriin sagootin ah iyo dareenkooda muddadii ay wada joogeen iyo xusuusta ay u hayaan kusoo bandhigay baraha bulshada, waxaanay uga mahad celiyeen waxqabadkiisii muddadii 9-ka sannadood ahayd ee uu Real Madrid u ciyaarayay.
Sergio Ramos ayaa inyar kaddib markii lagu dhowaaqay heshiiska waxa uu bartiisa twitterka kusoo qoray farriin macasalaamayn iyo qiraalka waxqabadkiisii ah, waxaanu ku tilmaamay ciyaartoy aan ka go’ayn xasuustiisa iyo taariikhda Real Madrid.
“Cristiano, goolashaadii, tirooyinkaagii iyo wax kasta oo aynu ku wada guuleysanay iyaga ayaa iskood u hadlaya. Waad u qalantaa in baal muhiim ah aad ka gasho taaariikhda Real Madrid, jamaahiirtuna mar walba way ku xasuusnaan doonaan. Anigana farxad ayay ii tahay inaann kaa garab ciyaaray, El Bicho. Salaan xabbadka ah ayaan kuu soo dirayaa iyo nasiib wanaagsan oo aan kuu rajaynayo!!” Sidaas ayuu bartiisa Twitterka ku qoray Sergio Ramos.
Intaas kaddib waxa isaguna bartiisa bulshada dul fadhiistay difaaca baasha bidix ee Theo Hernandez, waxaanu sheegay inay farxad u ahayd inuu wakhti la qaatay Ronaldo, waxaanu ku yidhi qoraalkiisa sidan: “Farxad ayay ii ahayd inaan ka garab ciyaaray xiddiga dunida ugu wanaagsan. Wanaag oo ayaan kuugu rajaynayaa kooxdaada cusub.”
Laacibka da’da yar ee Marco Asensio oo ay isku dhowaayeen Ronaldo ayaa isaguna tibaaxay inay farxad u ahayd inuu ka garab ciyaaro Ronaldo, waxaanu yidhi: “Farxad ayay ii ahayd inaan kaa garab ciyaaray, wax kastana tusaale ayaad iigu ahayd. Nasiib wanaagsan ayaan kuugu rajaynayaa heerka cusub ee aad gashay.”
Halgamaaga khadka dhexe ee Casemiro ayaa qirtay inuu wax badan ka bartay Ronaldo muddadii ay wada joogeen Real Madri, isla markaana ay ahaayeen saaxiibo isku dhow, waxaanu: “Wax baan kaa bartay, kula farxay oo kula guuleystay. Waan kaaga mahadcelinayaa wax kasta saaxiib.”
Lucas Vazquez mar kasta oo uu garoonka ku jiro waxa uu isku deyi jiray inuu si dhow ula shaqeeyo Ronaldo, waxaanay taasi muujinaysay inuu ku qanacsanaa ka garab ciyaaristiisa. Farriin kooban oo uu bartiisa bulshada ku baahiyey inyar kaddib heshiiska, ayaa waxa uu ku yidhi sidan: “Waxa aad tahay, ahaana doontaa lambarka koowaad. Dhamaan taageereyaasha Real Madrid waxay kuu xasuusan doonaan hoggaamiye ahaan. Nasiib wanaagsan ayaan kuugu rajaynayaa kooxdaada cusub Eel Bicho!”
Nacho Fernandez ayaa isaguna ku sifeeyey Ronaldo hoggaamiye mar walba difaaci jiray garanka Real Madrid.
Xiddiga reer Wales ee Gareth Bale ayaa isaguna dhankiisa nasiib wanaagsan uga rajeeyey saaxiibkii Ronaldo, waxaana farriin uu ku baahiyey bartiisa Twitterka uu ku yidhi sidan: “Ciyaartoy cajiib ah iyo wiil sare! Farxad ayay ii ahayd inaan shan sannadood kaa garab ciyaaray. Nasiib wanaagsan ayaan mustaqbalka kuu rajaynayaa saaxiib.”
Si kastaba ha ahaatee tegitaanka Cristiano Ronaldo ayaa si weyn looga dareemay guud ahaan dunida iyo gaar ahaan dalka Spain, waxaana isbeddel badan ku imanayaa Real Madrid oo u dagaallami doonta inay suuqa u gasho ciyaartoygii u beddeli lahaa.